Shuangye Electric Bike yevakuru vanotora aluminium alloy gomo bhasiketi furemu, 21 Speed ​​Shift, isina mvura uye inobvisa yakavanzwa bhatiri uye 160 diski brake
Zvakanaka kugadzira bhasikoro remagetsi A6AH26 ine lithium battery mubundo, inofanana nebhasiki chaiyo pakutanga.
26 / 27.5 / 29 Inch Shuangye Ebike yeVakuru vane aluminium alloy yemagetsi gomo bhasikoro furemu, 21 yekumhanyisa giya uye inobviswa isina mvura isina lithiamu bhatiri.
Shanduro yakanakisisa yepamusoro yebhasikoro bhasikoro A6AB26 nebhoti lithiamu battery, kuita kuti uende mberi nekukurumidza.
Shuangye 2000W 26 Inch Fat tire E Bikes ane aluminium alloy bike furemu, 21/27 kumhanya giya, 60V lithium bhatiri uye 3W pamberi mwenje ne 5V 1A USB yekuchaira chiteshi.
Yakakwirira simba ebike A7AT26 ine yakakura huwandu lithium bhatiri, ipa yakawanda yakakwira kutiza kumhanya uye imwezve chinhambwe.
Shuangye New Design 26/28 Inch Guta Imba E-Bikes ine patent dhizaini aluminium alloy chimiro, yakakwirira kwazvo lithium bhatiri, 7/9/21/27 kumhanya giya, uye 160mm mehendi disc brake
Yakakwira magetsi emagetsi bhasikoro A5AH26 ine 48V mvura isina mvura uye inobvisa lithium bhatiri uye 500W / 750W brushless hub mota, inokupa wakasiyana kutapira kunzwa.
Shuangye 26 Inch Fat Mountain Electric Bike ine kukwidziridza aluminium alloy bhasikoro furemu, yakakwira chinzvimbo lithium bhatiri, kusimiswa pamberi peforogo uye 160mm yemagetsi disc bhureki.
Yekumhanyisa yemagetsi bhasikoro A6AH26F ine 48V / 60V yakakura uwezo lithium bhatiri uye 500W / 750W / 1000W brushless hub mota, suti pamhenderekedzo, chando, gomo uye kuguta kweguta.
Shuangye 26 Inch Mountain Electric Bike Yevanhu vakuru vanotora aluminium alloy bike furemu, 3 yakatasva modes, yakakura kukwanisa inobvisa lithium bhatiri.
Yakakurumbira dhizaini e-bhasiketi A6AD26 ine 36V / 48V inobvisa lithium bhatiri nekiyi kiyi uye inogona nyore kutora kuti ishandise, yakakwira simba brushless mota inopa simba yega yega uye nekumhanya kwakawanda, kusununguka kwakawanda uye kunakidza.
Shuangye Snow Folding Mafuta Magetsi Bike ne 20 * 4.0 inch Kenda mafuta tire, vhiri 7 kumhanya, inobvisa lithium bhatiri.
20 inch fat tire kupeta emagetsi bhasikoro A7AM20 inogona kupeta kumusoro kuti uchengetedze yakawanda nzvimbo uye nyore kutasva pamhenderekedzo, chando, jecha uye guta.
Shuangye 20 Inch Electric Fat Tire Bike ine diki aluminium alloy bike furemu, rakawanda-inoshanda LCD kuratidza, 160mm disc brake
New dhizaini diki mafuta vhiri anonamira A6AH20F ndiyo yepasi rose e-bhasiki dhizaini, kungave iwe uchakwira chando, pamhenderekedzo kana kune commute, wakangoita, iri bhasikoro rinogona zvese zvaunoda.
Shuangye Mid-Drive mota Electric Bike inouya neyekutsva dhizaini aluminium alloy bike furemu, yakavanzika lithium bhatiri, Shimano 7 inomhanyisa switch.
Fashoni yepakati mota drive mota gomo e-bhasiketi A6AH26MD ndeimwe yeiyo itsva yekugadzira ebike, kupa simba rakawanda simba uye kutsiga pakukwira.
Shuangye Dual mota Moutain Fat Tire Electric Bike yakagadzirirwa nealuminium alloy bhasikoro furemu, hukuru hwakakura lithium bhatiri, kumberi & kumashure brushless hub mota
26 inch fat tire maviri maviri mota yemagetsi MTB kukupa yakakwira kutasva simba, kuunza kaviri kunakidzwa kutasva ruzivo kunzwa. Inokodzera nzira iri kure, jecha terrain, gomo, ect.